Olee otu oké ifufe | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ifufe. Okwu di ebube nke ichoro n’oge obula, ma oburu na mmiri ozuzo adighi ala. Ha na-eweta mmiri ozuzo na-eche ogologo oge, mana ha nwekwara ike iwepụ ọtụtụ awa nke ìhè, site na iweta igwe ojii.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọnọdụ ndị dị mma dị, ha nwere ike ịghọ ihe omume ihu igwe nwere ike imebi, dị ka cyclones ndị ọzọ, nke ifufe ha nwere ike ịfe karịa 119km / h. Ka anyị mara lee ka mmiri si wee daa.
1 Olee otu esi amalite oke ebili mmiri?
2 Dị ebili mmiri
Olee otu esi amalite oke ebili mmiri?
Oké ifufe, ebe dị ala, ma ọ bụ cyclones, dị ka a na-akpọ ha mgbe ụfọdụ, na-etolite na Intertropical Convergence Zone (ITCZ), mgbe ihu oyi na-agafe nke dị ọkụ. N'ime ime nke a, igwe ikuku na-ekpo ọkụ, na-agbagharị ma na-ejedebe n'ime ya. Ikuku a na-ekpo ọkụ tọrọ atọ a na-akpọ squall, nke na-agbagharị na-echegharị na Northern Hemisphere, ma ọ bụ na-agagharị na Southwest Hemisphere.
Ha metụtara ifufe siri ike y elu ikuku, nke na-ekpuchi ihu igwe na igwe ojii.
Dị ebili mmiri
Ọtụtụ ụdị oké ifufe na-akwanyere ùgwù:
Nsogbu Tropical: nke a maara dị ka oké mmiri ozuzo, ajọ ifufe na ajọ ifufe, ha bụ cyclones nke na-etolite na oke osimiri nke ebe okpomọkụ. Ha nwere mpaghara ala dị ike dị elu na nrụgide dị elu na mbara igwe. Ha na-emepụta ikuku nke 120km / h ma ọ bụ karịa.
Ekuku okuku: a na-etolite ya na latitude karịrị 30º, ma ọ bụ ikuku abụọ ma ọ bụ karịa.
Oke mmiri ozuzo subtropical: ọ bụ ajọ ifufe nke na-etolite na latitude nso n'akụkụ ikuku.
Polar cyclone: a cyclone amalite ngwa ngwa, naanị n'ime awa 24. Ọ dị ọtụtụ narị kilomita n'obosara ma nwee ifufe siri ike, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị karịa nke ajọ ifufe.
Mesocyclone: Ọ bụ vortex nke ikuku nke ihe dịka 2 ruo 10 kilomita na dayameta nke a kpụrụ n'ime ụdị oké ifufe a maara dị ka nnukwu anụ mmiri. Mgbe igwe ojii na-agba ọsọ, ọsọ ntụgharị na ọkwa ndị dị ala na-abawanye, nke mere na igwe ojii na-asọpụta nke nwere ike ibute oke mmiri ozuzo.
Oké ifufe na-adọrọ mmasị na ịtụnanya, ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Olee otu oké ifufe
Ndewo, agụrụ m na "ikuku a na-ekpo ọkụ nke tọrọ atọ ka a na-akpọ squall, nke na-agbagharị na ntanetị na Northern Hemisphere, ma ọ bụ na-aga elekere mgbede na Southern Hemisphere."
Ọ bụrụ na m enwetaghị ya, anticyclones na Northern Hemisphere na-agbagharị na ntanetị.
O doro anya na enwere ihe gbanarịrị m, mana amabeghị m nghọta na isiokwu a.
Kedu ụdị oke ifufe dị ebe ahụ?